ဆုံဆည်းရာ: အစောကြီးထဲကသိပီးသားပါ နအဖရယ်
ဥပဒေကိုလုပ်ချင်သလိုလုပ်နေသော နအဖစစ်အာဏာရှင်များအကြောင်းကို ပြည်သူတွေကအစောကြီးထဲကသိပီးသားပါ။
မပြောချင်လို့ကြည့်နေတာကို ဟုတ်လှပီထင်ပီးကန်းတက်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မကြာခင် ပြည်သူလူထုကြီးနှင့် သမိုင်းရာဇ၀င်ဒဏ်သင့်မူကို နအဖမှခံရတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း..............
Posted by soneseayar at 3:12 PM
where can i watch the whole show ?
pls link me? thanx